Iindaba -I-Antibacterial Polyurethane eNtsha inceda uKhenketho olusempilweni
Nge-6 kaSeptemba, i-liming yophando lwekhemikhali kunye neZiko loYilo lasungula imveliso yesibini ye-anti-bacterial polyurethane yezithuthi, i-polyurethane automobile skylight glass edging iimveliso zothotho, ezineempawu ezintle ze-antibacterial, xa sele ikhutshiwe, yakhawuleza yanika umdla wabaninzi.
Ingxelo yovavanyo ibonisa ukuba ukusebenza kokungunda kolu luhlu lweemveliso kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-0, kwaye inqanaba lokulwa neentsholongwane lifikelela ngaphezulu kwe-99.9%. Inezinto ezintle kakhulu zokungunda kunye neempawu zokulwa neentsholongwane, kwaye zinokuthintela ukuzala kwebhaktiriya kunye nomsebenzi wokukhula komphetho wefestile, ukuze kufezekiswe injongo ye-anti-antibacterial ephezulu.
"Emva kokugqitywa kwento yokudibanisa ivili lokuqhuba isanti eline-antibacterial, siye sazenzela ngokuzimeleyo enye imveliso entsha yokubulala iintsholongwane-iAntibacterial Polyurethane yemoto ejikeleza ukukhanya kweglasi, eyaqhubeka ukuphucula izinto ezintsha zokunceda uhambo olusempilweni." Usekela-injineli oyintloko weZiko leLiming, umphathi jikelele wenkampani yophuhliso lwe-polyurethane uZhao Xiuwen uthe.
Njengoluhlobo lwezixhobo zokuphucula intuthuzelo yemoto, ukukhanya kwesibhakabhaka ngokuthe ngcembe kuye kwaba sisimo esifanelekileyo seemoto ezihamba abantu. Nangona kunjalo, isibhakabhaka simi kwimeko yemozulu ngaphandle kwesithuthi kunye nendawo yokuhlala ngaphakathi kwisithuthi, ke ngoko sinokucaciswa okuthile. Isibane esibhakabhakeni siphezulu emotweni. Ngaphantsi kwemeko yokukhanya kunye nemvula ixesha elide, ulwakhiwo lwangaphakathi njengejelo lesikhokelo samanzi lihlala likwimeko efumileyo, ebonelela ngendawo yokufudumeza ukukhula kwazo zonke iintlobo zebacteria kunye nezibumba. Kwangelo xesha, isibhakabhaka siqhagamshelene ngokuthe ngqo kwi-cockpit, eyonyusa umngcipheko wokudluliselwa kwebhakteria, ukungunda kunye nokukhuthaza.
Iingcali zikholelwa ukuba inoveli ye-coronavirus pneumonia yindlela eqhelekileyo yesifo. Ukusetyenziswa kwezixhobo zokugoqa iglasi yokulwa nesibacteria kubaluleke kakhulu ekuthinteleni ukusasazeka kweentsholongwane kunye nokukhusela impilo yabakhweli.
"Uthotho lwe-Antibacterial Polyurethane yeemoto ezijikeleza ukukhanya kweemveliso zeemveliso ziyimveliso emitsha yokuthambisa iglasi ephuculwe ngokumiselwa esibhedlele ngokuzimeleyo ngokusebenzisa itekhnoloji ye-nano antibacterial kunye nokujolisa kwezixhobo eziphezulu ngexesha lobhubhane. ngu-4; inqanaba levumba ngu-3.0-3.5, ephambi kwebanga lesi-4 lemveliso efanayo; ukuthuthwa kunye nokugcinwa kweesocyanate eziguqulweyo zikhululekile ukusuka kwi-15 ukuya kwi-35 ℃ yeemveliso ezifanayo kwilizwe liphela ukuya kwi-5℃-35 ℃; Ireyithi yokupasa yokuqala yeemveliso ingaphezulu kwe-98.0%, ngaphezulu kwe-93% yeemveliso ezifanayo zakwamanye amazwe; Iimpawu zoomatshini ezinje ngamandla eqine kunye namandla okondla zingaphezulu kwe-20% ngaphezulu kunezo zeemveliso ezifanayo emhlabeni. Ukusebenza kwemveliso yalo kudlulisile kuvavanyo lwegama lemoto elidumileyo, kwaye kunikezelwe ngokuthe ngqo kumashishini amaninzi emveliso.
"Inoveli ye-coronavirus pneumonia izakuqhubeka isomelezwa kwixa elizayo, kwaye izakubanegalelo kuthintelo lokusasazeka kwezifo, umlo wokulwa nenyumoniya entsha kunye nokukhuselwa kwempilo yabemi." UZhao Xiuwen utshilo.